site ha na 21-02-07
Mgbe ogologo oge nke mmepe na ụlọ ọrụ kandụl, anyị Winby kandụl akwakọbawo ọtụtụ ndị ahịa ma nata otuto dị ukwuu site n'ọtụtụ mba. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ndị ahịa na-amata ngwaahịa na ọrụ anyị. Nke a di egwu, ma m nwalere m candl ...
Anyị mere nzukọ kwa afọ anyị n’izu gara aga, ọ bụ oge na-atọ ụtọ, nke onye ọ bụla n’ime anyị ka nwere ike icheta. Emebere mpempe akwụkwọ maka nzukọ kwa afọ. Onye ọ bụla na-eji ejiji ma na-ejegharị n'uwe ya kachasị mma. Enweghi mmetụta nke ngwa ngwa banyere nnukwu s ...
Bylọ ọrụ kandụl Winby bụ ụlọ ọrụ ọkachamara iji mepụta kandụl na-esi isi, ite kandụl, kandụl ogidi na kandụl nka. Anyị esonyela na Canton Fair ruo ọtụtụ afọ, ma dọtakwuo ọtụtụ ndị ahịa si ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Ruo ugbu a, anyị ka bụ isi ...